Kooxda Real Madrid oo qorsheynaysa inay dib u soo ceshato Cristiano Ronaldo & Qiimaha ay u bandhigayso Juve oo daaha laga rogay – Gool FM
(Madrid) 07 April 2020. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa damacsan inay soo bandhigto qorshe ay dib ugu soo ceshanayso ciyaaryahankeedii hore ee Cristiano Ronaldo, waxaana la sii ogaaday xitaa lacagaha ay u bandhigayso Juventus.
Sanadkii 2018-kii ayuu ka tagay kooxda Real Madrid, waxaana kabtanka xulka qaranka Portugal uu u wareegay dhinaca Naadiga Juventus ee Talyaaniga, taasoo kala baxday lacag ka badan 100 milyan oo gini.
Ronaldo ayaa dib uga soo muuqday suuqa kala iibsiga xiddigaha kaddib labo sanadood oo uu ku qaatay Waddanka Talyaaniga, waxaana xagaagan ay kooxo badan diyaar u yihiin inay ku tartamaan saxiixiisa.
Warsidaha Corriere Dello Sport ayaa warinaya in kooxda Real Madrid ay dib u heli karto ciyaaryahankeedii hore haddii ay soo gudbiso dalab muhiim ah oo ay ku qanacdo Juve, maadaama kooxda ka dhisan Turin ay dhibaato dhaqaale ku habsatay, isla markaana ay rabto inay yareyso xiddigaha mushaharkaadka badan ka qaata, kan ugu horreeya in la dirana dabcan uu yahay CR7.
Waxa uu Warsidahan warbixintiisa ku daray in Real Madrid ay diyaarisay inay Cristiano Ronaldo ku dalbato adduun dhan 58 milyan oo euro oo lagu daray mushaharkiisa oo sanadkii ay siin doonto 31 milyan oo euro.
Sheekadaas waa mid uu raali ka noqon karo Ronaldo, halka kooxda Juventus ay dhankeeda aqbali doonto inay qaadato lacagtan si mashaakilkeeda dhaqaale ay hal ugu hesho.
Mudaddii uu Cristiano Ronaldo joogay garoonka Santiago Bernabeu waxa uu ku helay xusuus weyn, isagoo caasimadda Spain ku qaaday afar Champions League oo saddex ka mid ah ay xiriir ahaayeen, halka sidoo kale uu ku hantay Los Blancos afar jeer abaal-marinta shaqsiga ah ee Ballon d’Or.